Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Gastric Juice အစာခြေအရည်
Sun, Mar 11, 2012 at 9:12 AM
အစာအိမ်ကထုတ်တဲ့ အက်စစ် အထွက်နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာက အက်စစ် အထွက်များခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ တူလားသိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အက်စစ်အထွက်များလို့ထင်ပြီး Omeprazole မနက်တစ်လုံး ညတစ်လုံး သောက်ပါတယ်။ လက္ခဏာက ပိုပိုဆိုးလာသလိုပါပဲ။ အက်စစ် အထွက် နည်းနေရင်ရော ကုလို့ရပါသလား။ သောက်ဆေးတွေက ဘာတွေသောက်လို့ရပါလဲ။ တစ်ပတ်လောက် စမ်းသောက်ကြည့်လို့ ရပါသလား။ အမည် (့)၊ အသက် ၂ဝ၊ နေရပ်-ရန်ကုန်။
များလဲမကောင်း၊ နည်းလဲ မကောင်းတာထဲမှာ အစာခြေရည်လဲပါတယ်။ များတာကိုတော့ လူသိများတယ်။ မေးတဲ့သူ ကျေးဇူးတင်ဘို့ကောင်းပါတယ်။ အက်စစ်ဓါတ်များလို့ Gastric Ulcer အစာအိမ်လေနာဖြစ်တာရှိသလို နည်းလို့လဲ ရောဂါရစေနိုင်တယ်။ Hypochlorhydria (အက်စစ်) နည်းတဲ့ရောဂါနဲ့ Achlorhydria (အက်စစ်) မရှိတဲ့ရောဂါဆိုတာတွေ ရှိတယ်။ လူ့အစာအိမ်ထဲက Gastric Juice အစာခြေအရည်ကို Gastric acid အစာခြေ-အက်စစ် လို့လဲခေါ်တယ်။ ဓါတုဗေဒမှာ (အက်စစ်) ဓါတ်ကို pH (ပီအိတ်ခ်ျ) နဲ့ တိုင်းရလို့ သူ့မှာ pH 1.5 ကနေ 3.5 အထိရှိတယ်။ Hydrochloric acid (ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်-အက်စစ်) အပြင် Potassium chloride (ပိုတက်ဆီယမ်-ကလိုရိုက်) နဲ့ Sodium chloride (ဆိုဒီယမ်-ကလိုရိုက်) တွေလဲပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့အထဲက Proteins (ပရိုတင်း) ကို အဓိက ချက်လုပ်ပေးတယ်။
အစာခြေအရည်ကို အစာအိမ်အတွင်းနံရံက (ဆဲလ်) လေးတွေကနေ စစ်ထုတ်ပေးနေတယ်။ တခြား (ဆဲလ်) တွေကနေ Bicarbonate (ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကိုပါ ထုတ်ပေးနေလို့ (အက်စစ်) ဓါတ်ကို လိုတာထက် ပိုမသွားအောင် Neutralization ဓါတ်ပျယ်မှု ဖြစ်စေတယ်။ Mucus အချွဲရည်လဲထုတ်ပေးသေးတယ်။ (ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကို Duodenum အူသိမ်အစပိုင်း အကွေးနေရာကလဲ ထုတ်ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် အစာခြေအရည်က အဲဒီနေရာမှာ (ပီအိတ်ခ်ျ) 4.5 ကနေ 5.0 အထိ ရောက်သွားစေမယ်။
အစာအိမ်က စစ်ထုတ်ရည်ကို Autonomic nervous system (အော်တိုနောမစ်) အာရုံကြောစနစ် နဲ့ ဟော်မုန်းတွေကနေ ထိန်းပေးနေတယ်။ Vagus nerve (ဗေးဂတ်စ်) အာရုံကြော နဲ့ Gastrin (ဂက်စထရင်) တို့က အရေးပါတယ်။
အစာအိမ်မှာ အက်စစ်ဓါတ် နည်းနေတာဟာ Gastroesophageal reflux disease အစာအိမ်-အစာမြိုပြွန်-အထက်ဆန်ရောဂါ ဖြစ်နေသလို ခံစားရမယ်။ စားသမျှ (ပရိုတင်း) တွေကို မချက်နိုင်တော့ဘူး။ (ဗက်တီးရီးယား) တွေ ပိုများနေမယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ အစာတွေ ဗီတာမင်တွေကို ကောင်းကောင်း စုပ်မယူနိုင်လို့ အားနည်းလာမယ်။ ရောဂါပိုး ဝင်လွယ်မယ်။ ပင်လယ်စာစားရင် သိသာမယ်။ Magnesium (မက်ဂနီဆီယမ်) ဓါတ်၊ Zinc သွပ်ဓါတ်နည်းမယ်။ Vitamin C, K, B complex (ဗီတာမင်) စီ-ကေ-ဘီအုပ်စုတွေ နည်းမယ်။ Stomach pains ဗိုက်နာမယ်။
• Pernicious anemia သွေးအားနည်းရောဂါ၊ Atrophic gastritis အစာအိမ်ရောဂါတမျိုး နဲ့ Stomach cancer အစာအိမ်-ကင်ဆာရောဂါတွေကနေလဲ ရစေနိုင်တယ်။
• Radiation therapy အစာအိမ်ကို ဓါတ်ကင်ရလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• Niacin deficiency (နိုင်ယာစင်) ဓါတ်နည်းလို့လဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• Hypothyroidism လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းတဲ့ရောဂါဖြစ်ရင် Basal metabolic rate အခြေခံ ဇီဝကိစ္စ-လိုအပ်ချက် ကျတာကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Autoimmune disorders (အော်တိုအင်မြူးန်) ရောဂါကနေလဲ ဖြစ်မယ်။
• Allergies (အလာဂျီ) ပိုရစေတတ်တယ်။
• Iron deficiency anemia သံဓါတ်နည်း သွေးအားနည်းရောဂါ၊
• B12 deficiency ဘီ-၁၂ နည်းရောဂါ၊
1. Failure to digest foods properly အစာ (ပရိုတင်း) ကို ကောင်းကောင်း မကျချက်နိုင်ဖြစ်မယ်။ Antacids အက်စစ် ပျယ်ဆေး၊ H2 blockers ဆေး နဲ့ protein pump inhibitors ဆေးတွေကနေဖြစ်ရတာဆိုရင် Osteoporosis အရိုးရောဂါ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
2. Failure to absorb trace elements လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ လိုအပ်လှတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းလေးတွေကို စုပ်ယူတာ မလုပ်နိုင်ဖြစ်မယ်။ Cancer ကင်ဆာ၊ Heart disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ Neuro-degenerative conditions အာရုံးကြောရောဂါတွေ သူများထက် ပိုရလာစေနိုင်တယ်။ Trace element ဓါတ်ပစ္စည်းလေးတွေ ဆိုတာ 100 micrograms per gram ထက်နည်းတာကိုခေါ်တယ်။ အရိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့ Boron (ဘိုရွန်)၊ လူပိုဝမှာနဲ့ ဆီးချိုကာကွယ်ဘို့လိုအပ်တဲ့ Chromium (ခရိုမီယမ်)၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ အတွက်လိုအပ်တဲ့ Cobalt (ကိုဘော့)၊ Copper (ကောပါး)၊ Fluorine (ဖလိုရင်း)၊ Germanium (ဂျာမေးနီးယမ်)၊ Iodine (အိုင်အိုဒင်း)၊ Iron သံဓါတ်၊ Manganese (မင်ဂနီးစ်)၊ Molybdenum (မော်လီဘဒီနမ်)၊ Selenium (ဆဲလယ်နီယမ်)၊ Silicon (စီလီကွန်)၊ Vanadium (ဗနေဒီယမ်) နဲ့ Zinc သွပ်ဓါတ်တွေပါတယ်။
3. Failure to sterilize the stomach contents အစာအိမ်ထဲမှာ ပိုးတွေကို သန့်မပြစ်နိုင်ဖြစ်မယ်။ Gastro-enteritis (GE) အစာအိမ်ရောင်ရောဂါ ရစေနိုင်တယ်။ ဝမ်းပျက်တာဖြစ်မယ်။ Food poisoning အစာဆိပ် သင့်နိုင်တယ်။ အစာခြေအရည်က မလိုလားအပ်တဲ့ Bacteria (ဗက်တီးရီးယား) နဲ့ Yeast (ရိစ်) တွေကို ရှင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒါတွေက လိုတာထက် များနေရင် အစာကို ချက်လုပ်ရမဲ့အစား Fermented (ကစော်) ဖေါက်သလို ဖြစ်လာစေမယ်။ လေထမယ်၊ လေပွမယ်။ လေတက်မယ်။
4. Stomach cancer အစာအိမ်-ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို များစေနိုင်တယ်။
5. Malabsorption of B12 ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ ဓါတ်ကို စုပ်ယူတာအားနည်းစေမယ်။
ကုသတာမှာ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံအရ လုပ်ပေးရတယ်။
• ဥပမာ လေဆေးတွေကြောင့်ဆိုရင် မသောက်ဘဲနေပါ။ တခြားနည်းကို ဆရာဝန်မေးပါ။
• Betaine HCL ကို အစာစားချိန်မှာ ပေးတာများတယ်။ Pepsin ခေါ်တဲ့ Digestive enzyme အစာခြေ (အင်ဇိုင်း) ပါတဲ့ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်။
• နည်းနေတာတွေကိုလဲ ဖြည့်ပေးရတယ်။ Minerals ဓါတ်ဆားတွေနဲ့ (ဗီတာမင်) တွေ ဥပမာ Vitamin B12 ပါမယ်။
• တချို့အတွက် အစာအိမ်အားနည်းနေလို့ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှိနေရင် Antifungals မှိုဆေး၊ Probiotics (ပရိုဘိုင်အောတစ်) ဆေး နဲ့ Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးတွေပါ လိုနိုင်တယ်။
• Acid supplements (အက်စစ်)ဆေး ရက်တိုသောက်ရမယ်။ Cider vinegar ကိုသုံးတာ များတယ်။ Vinegar (ဗနီဂါ) ဆိုတာ Acetic acid (အင်စစ်တစ်-အက်စစ်) ပါတာကိုခေါ်တယ်။ ကြာကြာသောက်တာ မကောင်းပါ။
• Ascorbic acid (Vitamin C) ဗီတာမင် (စီ) ကို အစာစားပြီးသောက်ပါ။
• Betaine Hydrochloride စားသုံးသင့်တယ်။ Beets ခရမ်းရောင်မုံလာဥမှာပါတဲ့ဓါတ်ဖြစ်တယ်။ ဆေးအနေနဲ့လဲ ထုတ်တယ်။